Antsirabe: Ramatoa hita faty teo amin’ny voirie – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2013 → novembre → 16 → Antsirabe: Ramatoa hita faty teo amin’ny voirie
Ramatoa iray manodidina ny 30 taona eo ho eo no hita faty teo anoloan’ny vorie ny talata 12 novambra lasa teo. Voalaza fa mpatory an-dalana ity ramatoa kely ity ary mazàna no mialoka sy matory eo an-davarangan’ny voirie izy, izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Tsy
fantatra marina ny tena antony nahafaty ilay ramatoa fa ny vatana efa nangatsiaka sisa no nalain’ny namany mpiara-matory aminy teo amin’io toerana io. Namela kamboty telo ilay ramatoa, zanany farany vao 3 taona monja no niandry ny vatana mangatsiakan’ilay reniny talohan’ny nahatongavan’ny namany naka azy. Fantatra fa zanany hafa ray ity niaraka taminy teo ity, araka ny loharanom-baovao mantsy dia nisara-bady izy. Voalaza ihany koa fa mbola velona ny ray aman-dreniny ary miasa amina toeram-pitsaboana iray eto Antsirabe. Nampanontany tena ny maro ihany ny zava nitranga, nisy mihitsy aza ireo sahy nilaza fa
nanary tena ilay ramatoa kely noho ny ditrany ka izay no antony naharava ny fanambadiany. Matetika no misy olona maty eo amin’ity toerana ity raha ny fazavana nomen’ny tompon’andraikitra ny filaminana ao amin’ny fokontany Mahazoarivo, ary fantatra fa olona fanimpitony maty izao ity .
Zava-doza hafa ihany koa no niseho nandritra io talata nahafaty ilay ramatoa io, fa araka ny vaovao voaray farany dia tsy hita ilay zanany niaraka taminy. Voalaza fa nisy nitondra nitsoaka ilay zazalahy kely ka mbola ifampitadiavana ankehitriny. Taorian’ny fanamarinana nataon’ny BMH sy ny polisy moa dia nalain’ny havany ny razana.